Maxaa hortaagan Jaamacada Carabta inay cambaareyso heshiiska Imaaraadka & Isreal? | Somalia News
Maxaa hortaagan Jaamacada Carabta inay cambaareyso heshiiska Imaaraadka & Isreal?
Muqdisho (Halqaran.com) – Hoggaamiyeyaasha Falastiin ayaa ku guuleystay in ay dib u cusbooneysiiyaan qadiyaddood dowladnimo ka dib kulankii arbacadii dhacay, laakiin waxay awoodi waayeen in ay xubnaha Jaamacadda Carabta ka dhaadhiciyaan in la cambaareeyo heshiiska Isreal iyo Imaaraadka ee la saxiisay bishii hore.
Wasiirada arrimaha dibadda Jaamacadda Carabta ayaa kulan ku yeeshay aaladda fogaan aragga, iyadoo madaxda Falastiin ay dabciyeen lah-jaddooda ku aadan heshiiskii uu Mareykanku garwadeynka ahaa ee 13 August ay wada galeen Imaaraadka iyo Isreal.
Previous articleEast Africa Seasonal Monitor – September 10, 2020 – World – ReliefWeb
Next articleLUBNAAN: Dekedda magaalada Bayruut oo uu dab xooggan ka kacay bil kadib qaraxyadii bur-buriyay